Saganta motumman Itopphiyaa Oromoon lafa isaa irraa buqqisuuf qopheefate iggituuf, Oromoon "diinni kana na godhe; sana na godhe" jedhee ofii gadduu dhiisee, yoomiyyuu caalaa of irraa loluu jalqabuu qaba. Caalaa nu salphisa malee! Akka jedhamutti, seera uumaa keessaa inni duraa of dandamachiisuu "self-preservation" dha. Dhiitama mirga keenyaa kana iggituuf of aarsa sacrifice feesisu kafaluu, ykn afaan keenya qabatnee akka sabaa lafa irraa haxaawamnee baduu dha. Sirna gabruummaa dhabamsiisuuf qabsaawaa kan ture, Fredrick Douglas kan jedhamu namni biyya Ameerikaa tokko dubbii bara godhe keessatti waan arman gadi jiru kan jedhee ture: "
Author: Voodookazahn Grosho
Kanneen bilisummaa saba isaaniitiif lubbuu isaanii kennan yoggayyuu yaadatamuu qabu. Lammiin goota isaa hin kabajne, gootummaaf bakka hin kennine yartuu namatiin dhaalama. Bara chaartaraa WBOtti dabalame. Yeroo kanatti dirqama itti kenname hundaa hamilee fi gootummaa raawwachaa nama ture, fakkeenya dhugaa qabsaawotaa tahee kan jaallan hamilchisee dha. Dhuma irratti goota akka isaa jaala Baazuqaa jedhamuun walitti bahan.
Jaallan isaa waliin lola addaan hin cinne godhuu fi dirqama qabsoo hunda bahuun qooda jaal raggaasaan gammachuun fudhatuu dha. Amalli isaa nama hedduu hin dubbanne fi nama tuttuqaa hin jaalanne, haasaa ifaa fi qulqullina jaallan isaa irraa eeguudha. Lolli gaafa dhalate nama hunda dura of aansu takkaa jaallan isaa irraa baqatee hin beeknee fi diinaaf mataa isaa gad hin qabannee dha. Jaallan hedduu waliin dabarse keessaa seenaa isaa adda godhee kan fudhadheef, jaal Raggaasaan gootummaa addaa inni agarsiisaa tureefi.
Tooftaa lolaa keessatti bakka rasaasa irraa nama dahuu fi akka gaarii diina itti barbadeessuu nama dandeessisu qabachuun barbaachisaa dha. Harka diinaa seenuu Dhuma keessa lola irratti harka diinaa seene. Lolli bakki itti tahe naannoo Kombolchaa [harargee] qubsuma diinaa ejersa Gooroo, Malkaa raafuu fi Odaa gidduutti. Inni kan dhukaasaa ture, qawwee PKM [machine gun]waan ture. Lola keessaa qofaa isaa duubatti hafee bahe.
Isaa qawwee addaan hiikaa jiru diinni waliif birmatu osoo inni hin argun magaalaa Ejersa Gooroo irraa dhufu irra bahee toohannoo diinaa jala oolee. Harka duubatti hidhanii mana hidhaatti darban. Jaal Raaggaasaan garuu harka hin kennine.
Ammas akkuma hidhannoo isaa hidhatetti jira. Hidhannoon isaa muratnoo isaa yoggayyuu diina Oromoo ajjeesuuf qabuu fi qabsoo Oromoo hanga guyyaa wareegamuutti itti fufuu ture.
Guyyaa guutuu yaadaa oole, akkamitti akka diina harkaa bahee jaallan isaatti dabalamu. Guyyaa garuu hidhaa harkaa of-irraa ciree akka hin beekkamne harka duubatti dachaasee [akkuma hidhaa jiru fakkeessee] ala na baasaa jedheen. Yeroo bakka fincaanii gahu harki kiyya hidhaadhaa Ziippii kofoo narraa furi jedhee wardiyaa qawwee nyaachifatee duuba deemu gaafate. Yeroo waardiyichi gadi jedhu jilbaan qoffee rukutee lafa buusee qawwee isaa butatee dallaa shiboon ijaarame utaalee bahe.
Qawwee fannoo shiboon qabee baafachuu dahdabee inni nagaan bahe. Kan nama raaju, j. Raggaasaan yommu gootummaa akkanaatiin diina galaafatee hidhaa cabsee bahu, diinaan akka malee reebamee golgaan lafee isaa caphaa fi duugdi isaa akkasumas qaamni isaa hundi bututaa ture.
Ajajaa Waraanaa irraa kaafamuu. Itti fufa. Posted by.
Seena Ummata Oromoo
Haalli uumama dachee Oromoo mataan isaa itti fayyadama Aadaa Uummata Oromoo waliin haala walitti hidhata godhachuu malaniin waan uumaman fakkaatu. Aadaan Uummata Oromoo hamilee hawaasichaa waliin kan wal qabate dha. Dinagdeeniifi amantaan Uummatichaallee Aadaadhuma sana keessaan calaqqisu. Aadaawwan Uummatichaa keessaa, Aadaa fuudhaafi heerumaa, Aadaa nyaataa, Aadaa uffannaa, aadaa waaqeffannaafi galateffanna, Aadaa ittiin aangoo walitti kennaniifi dabarsan k.